Fijerena lalina momba ny Testosterone Cypionate | AASraw
Fitsarana lalindalina kokoa amin'ny Testosterone Cypionate
/Blog/Gallery/Fitsarana lalindalina kokoa amin'ny Testosterone Cypionate
Posted on 11 / 19 / 2018 by Dr. Patrick Young nanoratra tao Gallery.
Ao anatin'izao tontolo izao izay lasa kanseran'ny steroïde ary ny olon-drehetra mampiasa azy mba hahatratrarana ny tanjon'ny vatana, ilaina ny mianatra bebe kokoa momba ny Testosterone Cypionate. Hiresaka momba ny antsipirihany momba ity steroid ity avy amin'ny dosage Testosterone, ahoana no hampidirana ny Testosterone, ny fomba hiatrehana ny fitsaboana Testosterone, ny valin'ny Testosterone Cypionate ankoatra ny hafa. Ny zavatra rehetra tokony hataonao dia mipetraka rehefa miditra ao amin'ny tontolon'ny Testosterone Cypionate izahay.
Manontany tena momba ny tranonkala tsara indrindra buy Testosterone Cypionate online? AASraw.com dia safidy tsara. Izahay dia orinasam-piantsonan'i Shina izay manolotra manokana ny famokarana, ny fivarotana ary ny fanaparitahana ireo fitaovana medikaly sy vokatra azo avy amin'ny fanafody, anisan'izany ny Testosterone Cypionate.
Ka inona no testosterone cypionate?
testosterone dia steroide anabolic io no voalohany nampiarahina tamin'ny tsena. Etsy ankilany, Testosterone Cypionate dia fiorenan'ny testosterone izay miadana tsikelikely, lava-ety ety ary mipetaka amin'ny solika. Izy io dia ampiasaina amin'ny fitondran-tena mihatsaravelatsihy izay tsy ampy amin'ny Testosterone ao amin'ny vatana izay miteraka olana samihafa amin'ny lehilahy.
Ny maha-dokotera anao, dia azonao omena anao amin'ny fampiononana ao an-tranonao izany rehefa avy nilaza ny dokotera anao ny fomba hanaovana izany. Soa ihany fa tena mandoto tena izy, ary mora ampiasaina izany. Azo atao ihany koa izy io amin'ny endriny ankapobeny.
testosterone dia novokarina voalohany tao amin'ny 1935, ary taorian'ny roa taona dia navotsotra teny an-tsena ho fanafody pharmaceutika. Tamin'ny voalohany, azo natao tamin'ny pellets ny endriny ary tatỳ aoriana dia tamin'ny endriky ny ester izay fampidiran-tsolosim-borona toy ny Testosterone Cypionate.
Ny methyltestosterone, iray amin'ny steroids anabolic voalohany nosoratana dia navoaka tao amin'ny 1935. Mampalahelo fa mifandray amin'ny hepatotoxicity izy io, ary noho izany dia lasa adaladala izany. Ny testosterone Cypionate (testosterone Cypionate) efa hatry ny ela dia nampidirina tao amin'ny tsena midi-1950 avy amin'ny orinasa antsoina hoe Upjohn. Tany am-boalohany dia namidy teo ambanin'ny anarana Depo-Testosterone izy ary mbola malaza amin'ny anarana mitovy ihany.
Upjohn dia nandray anjara tamin'ny famokarana Depo-Testosterone nandritra ny dimampolo taona mahery taorian'ny nanombohana azy. Ny Testosterone Cypionate dia aleon'ny Testosterone enanthate avy amin'ny bodybuilders sy atleta maro. Ny roa dia mitovy, fa ny antsasany kosa dia hafa.
Ny Testosterone Cypionate dia anisan'ireo steroids anabolic izay nahazo ny fankasitrahana ho ampiasaina amin'ny fitsaboana ara-pahasalamana ao amin'ny 1970s. Izany dia nofaritan'ny FDA ho ampiasaina amin'ny fitsaboana solon'ny testosterone. Nandritra ny taona maro, nampiasaina ny fampiasana azy satria tsy mety ampiasaina ho an'ny ankizy sy ny vehivavy izany. Ny testosterone cypionate dia nolavina ho tovovavy lahy mifehy ny fiterahana raha nalaina tamin'ny dosie 200mg isan-kerinandro.
Inona ny testosterone cypionate ampiasaina?
testosterone Cypionate dia manana fampiasana maro eo amin'ny fiainantsika. Ireto ny fampiharana.
Ao amin'ny tontolon'ny fitantanam-batana, ny tsirairay dia miezaka ny ho tsara indrindra. Na mpanaja na mpilalao ara-panahy ianao, dia ho takatrao fa indraindray ny fifaninanana dia mety henjana. Ankoatry ny fahafoizan-tena izay tonga amin'ny fandresena, nomena medaly na fiarovana toerana iray ao amin'ny ekipa matihanina dia zavatra tena mahavariana ho an'ny maro. Ny fahazoana ireo zava-bitanao ireo eo amin'ny fiainanao dia mety haharitra folo taona na mihoatra miankina amin'ny vatanao. Fa ny vaovao tsara dia fanafody mampitombo avo lenta toy ny Testosterone Cypionate dia mety hahavitanao ny tanjonao.
Nahoana àry ity medikaly ity no mahafinaritra ho an'ny fitaratra gurus? Ataon'izy ireo hozatra kokoa ny hozatra ary miaraka amin'izay dia ho sitrana haingana amin'ny fiasana mafy ianao amin'ny fampihenana ny fahasimban'ny atidoha mandritra ny fotoam-pivoriana. Ny tombony amin'izany dia ny fanatrehan'ny atleta henjana sy tsy tapaka raha tsy misintona.
Ny Testosterone Cypionate dia manampy amin'ny fihazonana ny kalitaon'ny tenda sy ny hery. Izy io koa dia mitazona hery sy tanjaka. Zava-dehibe iray hafa koa ny hoe maniry mafy ny hampiofana anao mandritra ny fotoam-pianarana ianao satria ity fitaovana ity dia hanatsara sy hampahery ny asanao.
Ny Cypionate Testosterone dia mampirisika ny fatiantoka matavy amin'ny fanatsarana ny asan'ny metabolika. Ity steroid ity dia afaka manao izany amin'ny fifindrana amin'ny receptor androgen mora ka mahatonga ny fihenan'ny tavy ary hisorohana ny fananganana sela vaovao.
Manatsara ny fahombiazany amin'ny vatana koa izany. Manatsara ny hozatra izy io, ka mihalany kokoa ny sakafonao ampiasaina mba hampivelatra ny hozatra kokoa, fa tsy ho voatahiry ho matavy.
Ny Testosterone Cypionate dia ampiasaina amin'ny fitsaboana solon'ny androgen. Amin'izao fotoana izao dia ankatoavin'ny FDA ny fitsaboana ny hypogonadotropic sy ny hogogonadisma voalohany (na azo akana na fiterahana). Izany toe-javatra izany dia aretina iray izay tsy ahafahan'ny lehilahy mamokatra testosterone ampy raha ny firaisana ara-nofo. Inona ny fahasamihafana eo amin'ireo roa ireo?
Hypogonadism hypogonadotropic-Izany dia mitranga rehefa misy faritra sasany ao amin'ny atidoha (hodi-jaza na hypothalamus) izay mifandray amin'ny testicles amin'ny fotoana hamokarana testosterone.
Inona no nandrodana ny vovoka nampiasaina / nandrolone tombontsoa?
Ny hogogonadisma ao amin'ny Kilonga dia mitranga rehefa tsy afaka mamokatra testosterone ampy ny testicles.
Raha misy lehilahy mijaly noho izany dia mandalo izy; ambany fiarandalamby, erectile dysfunction (olana mahazo sy mitazona fananganana), fihenam-bidy ary ny fiovaovan'ny toetr'andro. Mety hitarika ho amin'ny anemia koa izany, ny fahaverezan'ny volon'ny volo sy ny volo, ny gynecomastia (fampiroboroboana ny nono) ary ny fihenan'ny vozona sy ny penis. Na dia izany aza dia tsy mbola voamarina ny fiarovana amin'ny fitsaboana ny homogonadisma efa hatry ny ela.
Ankoatra izany, dia ampiasaina izy io mba hikarakarana ny osteoporose, ny fitsaboana hormonina amin'ny lehilahy transgeneraly, oligospermia (misy seboka ambany), ny faharetan'ny taovam-pananahana, ny aretina totozy, ary ny homamiadana.
Ahoana no fiasan'ny testosterone cypionate?
Ny testosterone Cypionate dia iray amin'ireo androgen endogenous izay tafiditra amin'ny fitomboan'ny taovam-pananahana lahy. Izy io koa dia manampy amin'ny fiarovana ny toetra mampiavaka ny firaisana ara-nofo. Anisan'izany ny fizarana ny voankazo, ny fiovan'ny taovam-pananahana, ny fihenan-tsakafo, ny fampitomboan'ny lary, ary ny fitomboan'ny prostate sy ny matroka.
Ity zava-mahadomelina ity dia manana ny toetra mitovy amin'ny Testosterone, saingy ny tombony dia hoe efa manana halavam-potoana lava lavitra sy famoahana izy. Ao anatin'ny ora 24 eo amin'ny fitantanana azy dia mampitombo ny halavan'ny testosterone hatramin'ny 400%. Ny haavon'ny androgen dia mety hijanona ho an'ny telo ka hatramin'ny dimy andro aorian'ny fitantanana azy. Raha vao misy ny fitsaboana tratran'ny rongony, dia mety miteraka aretina sy hafanana eo an-toerana ny libido sy ny fihetseham-po.
Ny testosterone Cypionate dia miasa amin'ny fomba roa samy hafa. Ny voalohany dia amin'ny alalan'ny fiovan'ny estradiol taorian'ny fihenan'ny mpikatroka estrogen sasany. Izy io koa dia miasa amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny receptor androgen.
hisakana ny fiasan'ireny
Ny anabolika dia azo lazaina ho tsy azo avela ho azy izany. Ny testosterone sy ny esters dia tokony halefa amin'ny alalan'ny tsindrona satria tsy atahorana amin'ny aty amin'ny atiny izy ireo rehefa omena am-bava.
Raha vao misy ny fitsaboana amin'ny alàlan'io fanafody io, ny manodidina dia 1 L / kg.
Rehefa tonga ny fitsaboana, dia miditra ao amin'ny fitiliana ra ny zava-mahadomelina. Amin'ny fanovana, ny 40% aminy dia mifatotra amin'ny globulin ny plaza raha 2% ny azy dia tsy mifatotra na mifatotra amin'ny proteinina hafa anisan'izany albumin.
Ho an'ity zava-mahadomelina ity hanomboka hiasa, dia mila atao amin'ny enzymes. Ny asan'ny catalyst dia ny manapaka ny fifamatorana eo amin'ny Testosterone sy ny ampahany ampahany amin'ity molekiola ity. Ny testosterone Cypionate dia manana fotoana lavitr'andro kokoa noho ny haben'ny ester. Raha vantany vao misaraka ny fisintonana, ny testosterone dia rava ao amin'ny 17 ketosteroids. Izy io dia atao amin'ny alalan'ny roa, tsy toy ny lalana. Ny dihydrotestosterone sy estradiol dia metabolita mavitrika indrindra. Ny Testosterone dia rava ao amin'ny DHT ao amin'ny taratasy mivalona, ​​ny aty ary ny hoditra. Ny dihydrotestosterone dia mihabetsaka hatrany amin'ny androstanediol.
Ny 90% amin'ny dosage testosterone nomena tsindrim-bolo dia nesorina tao amin'ny urine amin'ny endriky ny glucuronic, ny testosterone sulfuric conjugates sy ny metabolites. Ny manodidina ny 6% amin'ny testosterone sisa dia nesorina tamin'ny fefy matetika ao amin'ny endrika tsy voafaritra.
Ny antsasaky ny fiainana an-taonany dia ny iray amin'ireo lava indrindra hatramin'ny valo andro.
Hevitra ho an'ny testosterone cypionate
Ny testosterone Cypionate dia ampiasaina amin'ny fitsaboana ny mariky ny hogogonadisma amin'ny lehilahy. Izany toe-javatra izany dia vokatry ny tsy fahafahan'ny vatana hahazoana testosteron ampy hormone sex.
Ny Testosterone Cypionate dia azo jerena amin'ny endriky ny vahaolana izay mety hitranga. Tokony halefa amin'ny hozatra izy io, ary ny zavatra mahazatra indrindra dia ny fahafahanao manao izany amin'ny fampiononana ao an-tranonao rehefa avy niresaka momba ny fomba hanaovana izany amin'ny dokoteranao.
Ny fitsaboana Testosterone Cypionate dia atolotra ho famoizam-panafody mahazatra sy marika nomerika. Ny marika dia Depo-testosterone.
Ny vokatry ny testosterone cypionate for bodybuilding
Ireo izay nampiasa ny Testosterone Cypionate dia afaka manaporofo ny vokatra mahatalanjona omen'ny vatana. Ny heriny dia nahatonga azy ho heverina ho steroïda ambony eny an-tsena. Fanampin'izany, manome vokatra haingana sy mahavariana izy io.
Raha vantany vao nampiasa izany ianao nandritra ireo roa ambin'ny folo herinandro, dia hanana;
Nampitombo ny fahaverezan'ny fatotra. Amin'ny alàlan'ny fanafoanana ny estrogen.
Manamboatra ny hozany haingana izy amin'ny fananganana ny selan'ny sela.
Amin'ny alàlan'ny fihazonana azota, dia manome anao ny tebiteby be.
Mampitombo ny herinao koa ny Testosterone Cypionate.
Ankoatra izany, ny Testosterone dia manakana ny fiantraikan'ny hormones hafa izay mety hahatonga ny fatiantoka ho tapaka mandritra ny fotoana fohy.
Ny vokatry ny testosterone cypionate
Mahagaga fa tsy miteraka aretina ity fanafody ity. Na dia mety ho voan'ny aretina Testosterone Cypionate aza ianao, dia ny vaovao tsara dia hoe azo tratrarina izy ireo.
Ny vokatra miavaka indrindra dia;
Ny akne- Ny fampiasana ny testosterone Cypionate dia mety hiteraka fotony. Mety ho olana izany, saingy ho tianao ny fisian'ny fitsaboana mahomby. Ny fitsaboana tena izy toy ny asidra glycolic, ny peroxide benzoyl, ary ny salicylic asid dia ny tsara indrindra ho an'ny fitsaboana ny akne amin'ny moderina akne. Tokony hihazona fikarakarana tsara sy fomba fanao mahazatra koa ianao mba hahitana ny hoditra mazava kokoa.
Ny fitomboan'ny volo - Izany fanafody izany dia mety miteraka ny fitomboan'ny volo amin'ny faritra tsy ampoizina. Raha toa ianao ka manana vatana tafahoatra na volon'ny volo, dia misy fomba sasany ahafahanao mampihena izany. Ny voalohany dia amin'ny fanoratana amin'ny fampiasana elektrika na hareza. Raha matetika no manome anao mirehitra ny ravinkazo, dia mety hieritreritra ianao fa mividy tsiro mivaivay.
Azonao atao koa ny mampifangaro na manaparitaka ny volony amin'ny fakany. Ny Waxing dia fomba hafa haingana amin'ny fanesorana ny volo eo amin'ny fotony. Ny fampiasana ireo zavatra simika matanjaka fantatra amin'ny hoe fitsaboana dia mety hanampy anao be dia be, fa raha manana hoditra marevaka ianao dia tokony hizaha azy aloha amin'ny toerana kely. Ny fomba hafa enti-manohitra ny volon'ny volo dia amin'ny alalan'ny fampiasana fanafody, fanesorana laser, ary elektrolysis.
Fitabatabana sy fanaintainana eo amin'ny tranokala fitsaboana-Tsy voatery halahelo noho ny fijalijaliana na ny fanaintainana eo amin'ny tranonkala fitsaboana ianao. Raha efa nisy tifitra teo aloha ianao, dia afaka milaza ianao fa ny fahantrana dia ara-dalàna raha mijanona mandritra ny andro vitsivitsy. Mba hampihenana izany dia miantoka ny manosika ny faritra voapetraka. Raha tsy mibebaka ianao, dia mety hiharatsy kokoa ny faritra. Mba hahatonga ny fanaintainana amin'ny fomba mahomby, dia mety hieritreritra ianao fa misy fanafody fanaintainana hanampy amin'ny fanaintainana sy ny fanaintainana. Fomba iray hafa hiatrehana izany dia amin'ny fihodinana ny fonosana mafana amin'ny toerana iray izay nomena ilay tifitra. Tokony hitady ny mason'ny dokotera anefa ianao indray mandeha raha tsikaritrareo fa tsy mihena ao anatin'ny 48 ora ny fanaintainana na ny fivoahana.
Gynecomastia (fanitarana ny tratra) -Tandremo angamba fa manjary lehibe ny tratrako rehefa mampiasa io fanafody io. Tsy tokony hanahy anao be loatra izany; Ireo torohevitra manaraka ireo dia ho tonga soa. Ny voalohany dia mampiasa akanjo fihirana. Safidy tsara izany satria mora amin'ny kitapo izany ary mampihena ny endriky ny tratra. Azonao atao ihany koa ny manandrana fomba fampiasana gynecomastia toy ny fampiofanana haingam-pihetsika mahery vaika (HIIT), fanosihosena, haino aman-jery fanontam-pirinty, ary andalana maromaro. Mba hampihenana ny endriky ny trotraky ny tebiteby, dia tokony hiezaka mafy ianao hanangana hozatra. Hahatonga ny tratra lehibe ho hita ho tsy dia voatonona. Ary satria ny fiteratra dia mampivoatra ny areti-mifindra, tokony hiala amin'ny sakafo matavy ianao ary handevon-tsakafo salama toy ny voankazo, voninkazo mivembena, trondro matavy ary paty manitra. Ny fomba iray hafa hanesorana ny gynecomastia dia ny fandidiana fandidiana izay hanaisotra ny matavy ao amin'ny faritra misy azy.
Fihetseham-po mahazatra - Manana fanoratana ara-dalàna ny fanoratana, saingy ny fananana tsy ilaina ireo dia mety ho rava. Tsy tokony hanakana anao tsy hampiasa Testosterone Cypionate izany. Azonao atao foana ny miatrika ny fananganana an-tsokosoko izay tonga amin'ny lalanao. Hatramin'izao, manontany tena momba ny fomba hanaovana izany ianao. Raha vao mitranga izany, dia tsy voatery hieritreritra ianao fa manimba anao izao tontolo izao; mipetraha ary mifohaza tsikelikely ary mijanona ho tony. Mba hampihenana ny fahamenarana manjo azy, dia azonao atao ny manazava ny fananganana amin'ny alalan'ny solosaina, ny lobaka na ny palitao. Tsy ilaina ny mangirifiry, samy mahatsapa izany avokoa ny rehetra ary mety tsy misy olona mahamarika fa manana iray ianao. Afaka misaintsaina, manandrana ary manelingelina ny tenanao ianao, maka dite mangatsiaka, manana fandroana mafana na manana fanazarana malefaka toy ny jogging. Na izany aza dia alefaso ny dokotera raha toa ka mampangirifiry ny fananganana azy.
Fihetsiketsehana izay mijanona ela kokoa noho ny mahazatra - Ny fananganana maharitra mihoatra ny ora na mihoatra dia tsy misy intsony. Ny Testypone Cypionate dia mety hiteraka izany, ary mety hiatrehanao izany amin'ny alàlan'ny fametrahana fonosana ranomandry eo amin'ilay faritra. Amin'ny alalan'io, fananganana mahery vaika dia afaka mandeha iray minitra. Ny dokotera iray koa dia mety hanome anao fanafody na fitsaboana hiatrehana izany.
Ny aretin'andoha - Mety hiteraka aretina amin'ny fampiasana Testosterone Cypionate. Mety sarotra ny miasa, mitondra fiara na miteraka resadresaka amin'ny lohanao marary, saingy afaka manao mihoatra noho ny mijanona ao am-pandriana ianao ary miandry izany mba handeha irery. Azonao atao ny manandrana manala ireo fanafody fanafody toy ny aspirine, naproxen, ibuprofen, ary acetaminophen. Azonao atao koa ny mampiasa ireto torohevitra manaraka ireto mba hiatrehana ny fanaintainana. Fenoy ny masonao ary mialà sasatra. Afaka manangona ny tempolinao sy ny tendanao koa ianao. Azonao atao ihany koa ny miala sasatra ary manandrana manamboatra lamba mafana na fantson-dabozia manodidina ny fotony sy ny vozon'akany. Mitadiava fitsaboana raha mitohy ny fanaintainana.
Ny fikorontanan-tsaina - Indraindray mety hahatsapa toy ny te-handany ny andro iainanao ianao mandritra ny andro hafa, dia mety hahatsiaro hafaliana ianao. Ara-dalàna raha tsy misy fiantraikany amin'ny asa ataonao isan'andro izany. Amin'ny lafiny iray, ny fiovaovan'ny fihetseham-po lalina dia mety ho marika fa misy zavatra tsy mety. Ny Testosterone dia mety miteraka izany ary raha manao izany izy, dia ny fifehezana izany. Raha manao fanatanjahan-tena tsy tapaka ianao, dia ho tsapanao fa ny fanatontosana izany dia mampihetsi-po anao avy hatrany. Ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana dia tsy hoe fanakianana fotsiny amin'ny fahasalamanao ara-batana, fa ilaina ihany koa ny fanatsarana ny toe-tsainao. Ilainao koa ny mampihatra ny fialan-tsasatra amin'ny fandraisana anjara amin'ny fialantsasatra fanao toy ny fisaintsainana sy yoga. Miangavy dokotera iray raha mahatsapa toy ny manelingelina ny fihetsikao ny fiainanao.
Ny fihenan'ny sperman'ny lehilahy dia miankina amin'ny fampiasana zava-mahadomelina amin'ny dosie avo- Raha toa ianao ka manana olana amin'ny fananana bevohoka anao noho ny fampiasana Testosterone Cypionate ianao dia mety handalo fitsaboana sy fanafody hormonina hanitsiana izany. Ankoatra izany dia azonao atao koa ny mampiasa ny fomba fampiasa teknolojia fanabeazana (ART). Raha toa ka tsy misy dikany ny fitsaboana, dia azonao atao ny mampitombo ny isan'ny fotoana anaanao hanao firaisana na manao firaisana rehefa mety hitranga ny fampakarana. Ny fikojakojana ny fanangonam-bokatra izay mety hisorohana ny fihoaram-pefy dia fomba tena tsara hifehezana izany.
Raha toa ka mahalemy ireo vokatra rehetra ireo, dia andrasana handeha irery izy ireo rehefa afaka andro vitsivitsy na herinandro vitsivitsy. Raha tsy izany, dia miresaha amin'ny dokotera na dokoteranao.
Ireo no vokatra lehibe tokony horaisina amim-pahamendrehana. Rehefa voamarikao ireo soritr'aretina ireo dia antsoy avy hatrany ny dokotera. Mangataha fanampiana avy hatrany raha vao mahatsapa ianao fa ny soritr'aretina dia mampatahotra ny fiainana ary raha mihevitra ianao fa fitsaboana ara-pahasalamana izy ireo. Ireto ny fiantraikany sy ny soritr'aretina tokony hitranga;
Herisetra amin'ny fo- Mba hahafantaranao fa mijaly amin'ny iray ianao, dia afaka mahatsikaritra fa manana ireto manaraka ireto ianao; ny tsy fahamendrehana eo amin'ny vatanao, ny fofona kely, ary ny fanaintainan'ny tratra.
Mitombo ny habetsahan'ny gland prostate. Mampihetsi-po azy io; ny tsy fahafahana manala ny bladè, mavesatra raha te handratra ianao, manana ranon-drenirano malemy na iray izay misafosafo sy manitsy ary manahirana manomboka mitrosa. Ny famantarana iray hafa dia ny nocturia (ny fahatsapana ny fanadiovana bebe kokoa amin'ny alina) ary mila maika haingana matetika.
Stroke- Ny kabarim-pahavokarana dia mety mampihetsi-po azy ary mahatsapa ho malemy amin'ny lafiny iray amin'ny vatana.
Ny homamiadan'ny prostaty - Ny dokotera dia tokony hanamarina ny olana rehetra ao amin'ny prostate aloha sy mandritra ny fitsaboana amin'ny Testosterone Cypionate indrindra raha dimy amby enimpolo taona na mihoatra.
Ny olana mikasika ny havokavoka - Azo sorohina amin'ny alalan'ny famoahana ny maso na ny hoditra, ny fivalanana maimbo, ny fahaverezan'ny fitiavan-tena, ny reraka tsy mahazatra, ny loko marevaka, ny fahazoana marefo toy ny mahazatra ary ny fihenan'ny tongotra sy ny tongotra. Mety ho tratran'ny fanaintainana sy ny fanaintainana sy ny fery ary ny hafanana koa ianao.
Polycytémia-Ity no fiakarana eo amin'ny isa mena. Ny famantarana dia; ny fihenan'ny fahamalinana ara-tsaina, ny reraka, ny fikorotanan-drivotra, ny fikoropahana, ny fisafotofotoana, ny taolam-paty ary ny fandokafana ny tarehy.
Ny embolism Pulmonary-Ity no famolavolana ny tosidra ao amin'ny havokavoka. Ny mari-pamantarana dia manasitrana rà, fifandimbiasana haingana, mitebiteby na malemy, trotraka, tratra ny alahelo na fanaintainana izay mendrika rehefa miala aina sy fohy fofona.
Trombôso lalina lalina - Ny fikorontanan'ny ra ao amin'ny tongotra lalina dia miseho amin'ny alahelony sy ny fanaintainan'ny tongotrao.
Ny dosage amin'ny testosterone cypionate
Ny fitsaboana testosterone cypionate dia misy fiantraikany amin'ny zavatra sasany. Ireo dia;
Ny fitondran-tena voatsabo.
Tena mafy ny toe-javatra
Ny aretina hafa mety ho azonao
Ny valiny dia mamaly ny doka voalohany
Ny endriny sy ny herin'ny fanafody
Misy endrika roa an'ny Testosterone Cypionate ny endrika voalohany amin'ny endrika generic. Izy io dia vahaolana azo ampiasaina amin'ny hery 100mg / ml sy 200mg / ml.
Ny faharoa dia ilay mari-pototra Depo-testosterone izay ao amin'ny endrika manjavozavo ihany koa. Azo alaina ao amin'ny 100mg / ml sy 200mg / ml.
Dosage ho an'ny hogogonadisma voalohany
Fanaovana dingana mahazatra - Ny dosage izay hosoloin'ny dokotera dia miankina amin'ny aretinao sy ny taonanao. Miankina amin'ny zavatra ilainao ny dokotera iray afaka mahafantatra hoe ny dosage no tsara indrindra aminao. Azony atao ny manolotra tahiry 50-400 mg ho an'ny herinandro 2-4.
Mihabetsaka ny dosage - Azonao omena dokotera ny dokotera mba hampitombo ny tahan'ny dosage arakaraka ny valin-teninao amin'ny fitsaboana, ny fitsaboana amin'ny vozon'ny testosterone ary ny fiantraikany eo an-damosinao.
Ny dosage lehibe indrindra amin'ity medikaly ity dia ny 400 mg fitsaboana ao amin'ny hozatra isaky ny roa alina.
Taratry ny zaza (12-17 taona)
Fanaovana dingana mahazatra - Ny dokotera dia hamaritra ny dosage an-janany arakaraka ny diany sy ny taonany. Hamoaka fitsipika araka ny antonony izy. Amin'ny ankapobeny, mety hanome soso-kevitra amin'ny dosage 50-400 mg amin'ny tsindrona kely ao anatin'ny roa ka hatramin'ny efatra herinandro izy.
Mihabetsaka ny dosage- Ny dokotera dia mety manapa-kevitra ny hampitombo ny fampiasana ny zaza arakaraky ny vokatry ny voany, ny valin'ny fitsaboana sy ny fitsaboana amin'ny testosterone.
Ny dosa farafaharatsiny tokony hozaraina ao amin'ny hozatry ny zanakao dia tokony 400 mg isaky ny roa herinandro.
Taratry ny zaza (0-11 taona)
Tsy mbola vita ny fianarana momba ny fiarovana sy ny fahombiazan'ny fanafody ho an'ny zaza latsaky ny 12 taona.
Dosage ho an'ny fitsaboana ny hypogonadotropic hypogonadism
Adult dosage (18 taona sy ambony)
Fanafody fanombohana - Ny fahasalamanao dia miovaova arakaraka ny aretinao sy ny taonanao. Ny dokotera dia afaka manapa-kevitra amin'ny dosage araka ny zavatra ilainao. Aretina amin'ny 50-400mg ao anatin'ny hozatra mandritra ny roa ka hatramin'ny efatra herinandro.
Mihabetsaka ny dosage- Ny dokotera dia afaka manoro hevitra amin'ny fitomboan'ny dosage miankina amin'ny vokatra hafa, ny valin'ny fitsaboana sy ny testosterone blood.
Ny dosia lehibe amin'ny fitsaboana 400 mg amin'ny tongotrao isaky ny alina.
Fanafody fanombohana - Ny dosia amin'ny zanakao dia miankina amin'ny aretina sy ny taonany. Manapa-kevitra amin'izany ny dokotera miankina amin'ny zavatra ilain'ny zanakao. Amin'ny ankapobeny, ny dosage dia tokony ho 50-400 mg ny tsindrona ao amin'ny voany taorian'ny herinandro rehetra 2-4 herinandro.
Mihabetsaka ny dosage-Azo ampiasaina ny dosage fananan-janaka, arakaraka ny fiantraikany eo amin'ny sehatr'izy ireo, ny valiny amin'ny fitsaboana sy ny fitsaboana amin'ny testosterone.
Ny dosim-kaonty farafahakeliny ao anatin'ny hozatry ny zanakao dia tokony 400mg isaky ny roa herinandro.
Mbola tsy voamarina raha azo antoka sy azo antoka izany fanafody izany ho an'ny ankizy izay latsaka ny 12 taona.
Raha toa ka mampiasa izany ianao mba hananganana ny hozatra dia hahatratra ny atletika mahomby dia ampy ny dosage 100-200 mg amin'ity rongony ity isan-kerinandro. Aorian'ny herinandro efatra dia mety hampitombo ny dosage miankina amin'ny vokatra azonao eo amin'ny vatanao na mifanaraka amin'ny fomba fiasan'ny vatana amin'ny fampiasana ny zava-mahadomelina.
Amin'ny ankapobeny, ny testosterone cypionate dia ampiasaina hanohitra ny fiantraikan'ny T-lanjan'ny steroids hafa mety horaisin'ny olona. Raha ampiasaina amin'izany, ny Testosterone Cypionate 200mg-400mg dia doka.
Ny tsingerin'ny testosterone cypionate
Raha liana ianao mandray Testosterone Cypionate injections amin'ny alàlan'ny tanjona amin'ny fandatsahana tavy sy fanorenana hozatra, tokony ho toy izao ny toetranao:
Ny Cycle Cytotecte Testosterone dia tokony 200mg isan-kerinandro hatramin'ny herinandro 1 ka hatramin'ny faha-12. Tokony hitanao anefa fa raha toa ianao ka mametaka Testosterone Cypionate amin'ny steroid hafa dia miova ny dosage. Nahoana?
Ny elanelam-panahy rehetra dia samy manana ny antsasaky ny fiainana. Ilainao ny mandinika izany alohan'ny fanapahan-keviny hamongotra ny steroïde sasany. Ary koa, tokony hitandrina ianao raha manomboka andia-pikirakirana, satria tsy fantatrao ny fihetsiky ny vatanao amin'ny steroid mihoatra ny iray. Mba hisorohana ny olana, dia azonao antoka fa hizaha ny steroid rehetra ianao amin'ny voalohany. Azonao atao koa ny misoroka izany ary mampiasa steroid iray isaky ny mandeha.
Izany fitsaboana izany dia zava-dehibe toy ny fitsaboana ny steroids. Satria, taorian'ny fampiasana Testosterone Cypionate, ny fahafahan'ny vatanao mamokatra ity hormonina ity dia efa voasakantsakana. Rehefa vita amin'ny tsingerin'ny Testosterone ianao, dia mety ho tototry ny estrogen ny vatanao. Satria ny vatanao dia miantehitra amin'ny injections amin'ny famokarana testosterone amin'ny azy noho izany ny fitsapana dia zara raha afaka mamokatra.
Testosterone cypionate fampitandremana
Alohan'ny hampiasa ity fanafody ity dia mila mahafantatra izay mety hitranga amin'ny vatanao ianao. Mety miteraka hypercalcemia amin'ny marary tsy an'asa. Raha mitranga izany, dia tokony hampijanona tsy tapaka ny fampiasana zava-mahadomelina.
Aza misavoana ny fampiasana ity fanafody ity amin'ny doka avo be satria mety miteraka fahasarotana amin'ny fiainana toy ny peliosis hepatis, carcinoma hepatocellular, ary adenomas hepatika.
Na dia mbola tsy voamarina aza izy ireo, dia nampitandremana ny marary fitsaboana amin'ny fampiasana an'io zava-mahadomelina io satria mety miteraka karôzôma prostatic sy hypertrophy prostatic.
Ny Cypionate Testosterone dia mety miteraka fisehoan-javatra mibaribary tromboembolika izay mety ho marihina amin'ny tsy fahampian-tsakafo, ody, ary fanaintainana. Raha mijaly ianao, dia atsaharo ny fampiasana ny zava-mahadomelina sy ny fifehezana araka ny tokony ho izy.
Ho an'ireo olona manararaotra io zava-mahadomelina io dia mety miteraka fihetseham-po marary ara-tsaina sy miady saina izy io. Noho ny nahatonga an'i Edema, mety ho loza mitatao amin'ny olona manana aretina hepatika, renena ary aretim-po. Mety hivoatra koa ny gynecomastia.
Ny alkaola benzyl ampiasaina ho fitsaboana dia mitarika ho amin'ny fiantraikany goavana toy ny aretim-pivalanana. Mety tsy hisy fiantraikany eo aminao ny vola miditra ambany. Mety ho voan'ny habeny koa ny olona salama efa ela be. Satria misy fiantraikany amin'ny fahamatoran'ny taolana.
Ary ahoana raha tsy mitandrina ny doka na ny mihoatra loatra aho
Ny fitsaboana Testosterone Cypionate dia fitsaboana maharitra ary mety hiteraka vokatra lehibe raha tsy mandeha tsara ny lalana.
Raha toa ianao ka mitsahatra tampoka na tsia ny fitsaboana, dia mety hiteraka fanafody tsy mahomby izany. Ny antony mahatonga ny zava-mahadomelina miasa tsara, ny habetsaham-bavaka manokana dia tokony ho ao amin'ny vatanao amin'ny fotoana rehetra. Raha tsy mandray an'io fanafody io ianao, dia mety ho voan'ny testosterone ambany ianao.
Raha tsy mitandrina ny doka na tsy mandray ny zava-mahadomelina araka ny fandaharam-potoana dia mety tsy mety tsara izany na tsy manomboka miasa intsony. Satria satria ny zava-mahadomelina dia miasa araka ny tokony ho izy, ny vola dia tokony ho ao amin'ny vatana foana. Tsy tokony haka mihoatra noho ny dipoavatra ianao raha manolo ny doka tsy ampy. Mety hiteraka voka-dratsy lehibe izany. Voantso ianao hiantso ny dokotera ary hilaza aminy ny fotoana farany nampidiranao testosterone cypionate. Hanampy anao hiatrika fandaharam-potoana vaovao izy.
Raha toa ka manana fitsaboana Testosterone ianao, dia midika izany fa mety hampidi-doza an'io fanafody io ianao ao amin'ny vatanao. Mety misy ny soritr'aretina:
Mitombo ny fihenan'ny sperm
Mety hiaina fikoratana izay mijanona ela kokoa noho ny mahazatra
Mety manana fananganana tsy tapaka ianao
Gynecomastia (fampivelarana tafahoatra ny tratra)
Ny fitomboan'ny volo
Famonoana sy fanaintainana eo amin'ny tranonkala fitsaboana
Raha toa ka miahiahy ianao fa naka ny Testosterone Cypionate loatra, mandinika ny dokotera na ny tobim-pitsaboana misy poizina ao an-toerana. Raha toa ka marary ny soritrareo dia midira avy hatrany any amin'ny efitrano fitsangantsanganana.
Ny fomba hahafantarana raha miasa ny zava-mahadomelina - Azonao atao ny mahafantatra raha miasa ny fanafody. Ho hitanao fa mihena ny soritr'aretin'ny testosterone ambany.
Fitandremana ny Testo Cypionate
Mba hisorohana ny olana hafa eo amin'ny Testosterone, mila miresaka amin'ny dokotera ianao mba hahafahany miteny aminao raha mety amin'ny fampiasana ny zava-mahadomelina. Raha manana fanontaniana ianao, dia azonao atao foana ny mangataka amin'ny dokotera mba hahalalanao tsara kokoa an'io fanafody io. Inona avy ireo zavatra tokony holazainao amin'ny dokotera alohan'ny hahatongavan'ny tsimokaretina Testosterone Cypionate?
Avelao ny dokotera hahalala raha tsy mahazatra anao ny fanafody na ny tsy fahasalamana mety ho azonao. Ny maha-zava-dehibe an'io dia ny fampidirana zava-mahadomelina hafa izay mety tsy ho zakanao.
Tokony ho fantatry ny dokotera koa ny tantaran'ny fitsaboana anao, ohatra, raha efa nisy aretim-pivalanana ianao taloha, aretina miteraka aretina, kanseran'ny prostaty, homamiadana eo amin'ny lehilahy, fitsaboana ambony, cholesterol avaratra, olana amin'ny voa, fo olana, fikorotanana, aretim-po (toy ny fo, fanaintainan'ny fo, ary ny tsy fahampian'ny fo) sy ny fitsaboana ao amin'ny havokavoka sy ny tongotra.
Raha voan'ny diabeta ianao, dia mety hampidina ny siramamy ao amin'ny ra izany. Mba hananana fiadanan-tsaina, dia tadidio fa matetika ianao no mijery ny siramamy ao amin'ny ra raha voatendry ary hamela ny dokotera hahalala ny vokatra. Raha hitanao fa misy siramamy ambany ambany, toy ny tongotra na tanana manjelanjelatra, ny fitabatabana, ny fahitana marevaka, ny hanoanana, ny fikolokoloana haingana, ny fanosihosena, na ny hafanana tampoka dia mampahafantatra avy hatrany ny dokotera anao. Raha te hanohitra izany, dia mety hisy fiovana eo amin'ny sakafo, ny fandaharan'asa, ary ny fanafody diabeta.
Ankoatr'izay dia mety hisy fiantraikany eo amin'ny koloroolinao ny Testosterone Cypionate ka hampitombo ny tahan'ny sifotra (aretin'ny ati-doha aretina) sy ny aretim-po. Ny azo antoka indrindra dia ny fanaraha-maso akaiky ny haavon'ny kôlesterôlanao.
Ampahafantaro ny dokotera raha tsy afaka mandeha na mandry ianao mandritra ny fotoana lava raha mampiasa Testosterone Cypionate. Mba hisorohana ny olana dia tokony hitandrina matetika ny kalitao ra ianao. Raha soloina vetivety ianao dia tokony hampahafantarinao amin'ny dokotera na dokotera ny zava-mahadomelina rehetra ampiasainao amin'izany fotoana izany. Izy io dia tokony hampidirina ny vokatra avy amin'ny herisetra rehetra, ny fanafody tsy mahazatra, ary ny fanafody.
Rehefa mampiasa io zava-mahadomelina io ianao, dia tokony hasiana fiheverana maro, satria mety hisy fiantraikany amin'ny fitomboan'ny taolana izay manakana ny haavon'ilay zaza izany. Tokony hanara-maso ny fitomboana sy ny fivoaran'ny taolan'ny zanakao ianao mandritra ny fitsaboana. Tokony hotandremana koa ireo olon-dehibe zokiolona amin'ny fitsaboana satria mahatsapa kokoa ny fiantraikany eo amin'ny fiantraikany eo amin'ny sehatry ny sandry sy ny tongony, ny olana amin'ny aty / prostaty.
Ny fanaintainan'ny fiterahana dia tsy ampy loatra, ary satria mety hisy fiantraikany eo amin'ny vohoka ianao, dia asaina manalavitra izany ianao raha toa ka miandry anao. Diniho ny fampiasana fanamiana azo itokisana amin'ny fiterahana toy ny fikarakarana fanafody na fimailo amin'ny fiterahana mba tsy hitera-doza raha mbola eto amin'ity medikaly ity. Ahoana raha tsy mitranga izany? Avelao ny dokotanao hahalala izany avy hatrany.
Mbola tsy voamarina izy io raha azo atao amin'ny rononon-jaza ity fanafody ity. Na dia izany aza dia fantatra fa mety hisy fiantraikany amin'ny famokarana ronono izany ka miteraka fahasahiranana amin'ny zaza minono. Mba tsy hitera-doza, aza ampiasaina ity fanafody ity raha mampinono. Tokony hikaroka toro-hevitra amin'ny dokotera alohan'ny fampinonoana koa ianao.
Ahoana ny fampidirana ny Cypionate Testosterone
Ny fampidiran-tena dia mety ho toy ny asa sarotra, nefa rehefa fantatrao ny fomba nanaovana azy dia ho takatrao ny zava-misy fa tsy mendrika ny fanahiana izany. Manomboka izao dia mety hanontany tena ianao; aiza no manomboka? Aoka ianao ho tony, miadana ary miaina ao. Izao no hatao:
Ataovy azo antoka fa manana doses tsara avy amin'ny Testosterone Cypionate-Counter ny marary fa manana ny dosage marina momba io zava-mahadomelina io ianao alohan'ny hanomezana tsindrona.
Mitadiava fanjaitra sy fanjifana mahazatra ary atsangano- Mba hahazoana tsindrona testosterone Cypionate; Ilaina ny fampiasana fanjaitra tsy ilaina izay efa tsy nampiasaina taloha. Ampiasao foana izay madio ary asiana ny fotoana rehetra tianao halefa. Tokony ho fantatrao fa ny tselatra testosterone dia matsiro sy marefo ary tokony tokony hampiasa tsiranoka matanjaka ianao hanamboarana ny zava-mahadomelina. Ny fanjaitra matanjaka dia mijaly mba hisorohana izany; Afaka manolo izany ianao amin'ny famerimberenana iray indray mandeha amin'ny fotoana hanomezana azy. Mariho fa rehefa manomboka ny fanjaitra na ny seranana, dia tsy mamokatra intsony izany ary tsy misy safidy ankoatra ny fanesoana azy.
Arovy ny tananao ary ataovy amin'ny fonon-tsakafo mangotraka- Ny fanadiovana tsara amin'ny tanana dia manakana anao tsy ho voan'ny aretina, ary raha mikaroka zavatra na zavatra tsy voafehy ny fonon-tànanao, dia tokony hosoloanao izany.
Ampiasao ny dosage mety- Mba hampidirana ny rivotra ao amin'ny tavoahangy mba hampiakatra ny tsindry anatiny. Ny tombony amin'izany dia ny fahafahanao misintona haingana an'io zava-mahadomelina io na dia eo aza ny hateviny. Azonao atao ny mamadika ilay tavoahangy etsy ambony ary mahazo ny fanafody azo avy amin'ny fanafody ilainao.
Mitadiava fanampiana kely kokoa: Tsy ilaina ny manaiky hanaintaina mafy rehefa misy zavatra azonao atao mba hahatonga ny fitsaboana ho tsy mampahory. Mba hahazoana antoka fa tsy handevona ny fanafody rehefa manao izany ianao, atsangano ny tebiteby, arotsaho ny rivotra ary esory izany. Ampiasao ny tànana voatsindrona ary aloavy amin'ny tanjaky ny iray. Tsy maintsy mangina sy tsy ampiasaina ihany koa izy io.
Aspirate ny serfingina-Rehefa tonga amin'ny injections, dia mety hiteraka olana lehibe ny bala rehetra miditra ao amin'ny vatana. Mba hahazoana antoka fa tsy mitranga izany, mila manantena ianao. Ny zavatra ataonao dia mihazona ilay seranana manondro ny fanjaitra tsy voafehy. Jereo tsara ireo blasan'ny rivotra mety ho eo amin'ny taratra. Flick avy amin'ny lafiny iray mba hahatonga azy ireo hifindra any an-tampony. Raha vantany vao azonao antoka fa maimaim-poana ny zava-mahadomelina dia manery ny rivotra. Mba hahafantaranao fa izany rehetra izany dia miandrasa kely amin'ny vahaolana hivoaka amin'ny tendron'ny tady. Mitandrema rehefa manao izany mba tsy hialana amin'ny tany.
Manomàna ny tranonkala fitsinjarana-Ity fampidirana ity dia tokony homena eo an-tampony ivelan'ny faritra na faritra ambony amin'ny tendron-tsofa. Tsy ireo faritra ireo ihany no azo ampiasaina, fa izy ireo no mahazatra indrindra. Ampiasao ny zava-pisotro misy alikaola mba handravana ilay faritra. Raha manao izany ianao, dia tsy misy toerana eo amin'ny hoditrao ny bakteria, ary manakana ny aretina koa izany. Mba hisorohana ny fampijaliana na fantson-dra, alao ny tranonkala fitsinjarana izay any amin'ny faritra ivelany amin'ny glute.
Inject- Manontany ny fomba hampidirana testosterone? Tazony ilay fitiliana misy ny dingan'ny 90 mahazatra eo amin'ny faritra misy ny tsimokaretina. Alefaso haingana avy hatrany izany ary soraty kely izany. Raha hitanao fa misy ra ao anatin'ilay seranana, midika izany fa naratra ny vina. Mitadiava toerana hafa mety tsara ary mangeja ny zava-mahadomelina tsy tapaka. Ny fahatsapana fivalozana kely na fanaintainana dia ara-dalàna fa raha toa ka mangirifiry be izany fanaintainana izany ary mifandray amin'ny dokotera avy hatrany.
Karakarao ny faritra fanorenana rehefa navoakanao ilay fanjaitra. Mba hanaovana izany amim-pahombiazana, tsidiho ny toeran'ny fidirana sy hametraka baoty kodiarana madio. Esory araka ny tokony ho izy ny fanjaitra sy ny angatra rehetra ampiasaina. Raha misy troll, tsy fahamendrehana na tsy fahampiana anao, dia mifandraisa avy hatrany amin'ny dokotera.
Ahoana no Storage testosterone Cypionate
Ny testosterone Cypionate dia tokony ho voatahiry ao amin'ny 20 ka hatramin'ny 25 degre Celsius. Atsangano koa ny hazavana, ny hafanana, ary ny hafanana. Arovy ny fanafody rehetra amin'ny ankizy mba hisorohana ny poizina. Rehefa tapitra ny fanafody dia atsipazo azy araka ny tokony ho izy. Aza avela hilentika io fanafody io na atsipazo amin'ny lavaka fanasan-damba izy io satria mety ho loto izany.
Recipes mba hahazoana Testosterone Cypionate amin'ny steroids vovoka
Miankina amin'ny fanaovana testosterone Cypionate? Ireo sakafo ireo dia hanome anao izay ilainao.
1. Test Cypionate 5gram conversion amin'ny 20ml amin'ny 250mg / ml
Inona no ilainao?
5gm amin'ny test cyp
1ml an'ny Alcohol Benzyl izay mitovy amin'ny 5% BA
25 ml menaka sesame
18 / 20 fanjaitra
What filter sterile
Afaho ny grama 5 amin'ny vovony
Apetraho ao anaty vovobony ny vovony
Ampio ny BA amin'ny tavoahangy
Apetraho ao anaty lafaoro ny menaka ary atsipazo azy. Manampy izany izy io mba hamerenana azy io. Heverao mihoatra noho izay ilainao mba hahafahanao miala ao anaty fonosana.
Ampio ny solika ho ao anaty vovobony ary tehirizo 2ml ho an'ny aoriana. Atsangano amim-pitandremana ilay volo.
Afaka manasitrana ilay fifangaroanao ianao raha tianao. Azonao atao ny mametraka izany eo amin'ny fanatodizany na ny mason'ilay fatana.
Raiso ny kodiarana 18 na 20 ary apetraho ao anaty vovon-tsakafo izany. Apetaho koa ny sivana "Whatmer sterile".
Mba hanamaivanana ny tsindry, dia asio fanjaitra hafa ao anatin'ilay vovobony matevina.
Ampiasao ny vinaingitra ary apetraho amin'ny alalan'ny filtre Whatman.
Raiso ny solika 2ml izay tao amin'ny orinasa hafa ary hazavao ny Whatman ho vahaolana.
2. Test Cypionate 10 gram conversion 40 ml amin'ny 250mg / ml
5 ml menaka sesame
2ml an'ny Benzyl Alcohol = 5% BA
Gramin'ny 10 amin'ny test cyp
3cc sy 5 / 10cc syringes
3. 60ml amin'ny 250mg isaky ny ml
Milliliter 7 mitahiry menaka
Gramin'ny 15 amin'ny Test Cypionate Powder
4. 250 ml amin'ny 80mg isaky ny ml
185 ml menaka grapseed
Gramin'ny 20 amin'ny Testosterone Cyp Powder
250 ml amin'ny 200mg isaky ny ml
5ml avy amin'ny voa nambolena
50g amin'ny Testosterone cyp Powder
5. 100ml amin'ny 250mg isaky ny ml
25 ml diloilo voa nambolena
75 ml 25g Testosterone cyp Powder
Ahoana no fomba hametrahana Testosterone Cypionate avy amin'ny solidera steroid
Azonao atao ny mieritreritra ny mividy steroids volo volo ary ataovy ny testosterone vita anao. Hampianarinay anao ny fomba fanaovana testosterone Cypionate vovoka.
Ny milliliter tsirairay avy amin'ny 100 mg isaky ny ml misy:
100 mg ny poezia Cypionate Testosterone
1 milliliter Benzyl benzoate
736 mg ny menaka voa kobonina
45 mg ny alika Benzyl
Dingana ara-dizitaly izay afaka mandrefy 0.01g
Fitaovana filalaovana sigara 22um
Vial-bozaka sterile izay misy isa
Seranana amin'ny habeny rehetra
Ny dingana voalohany dia ny handanjana ny Cypionate Testosterone ilaina ary hametraka izany ao anaty fitaratra vera. Add Benzyl Benzoate sy Benzyl Alcohol.
Ny solvents dia manomboka manala ny volo eo no ho eo, saingy raha te hampihena ny dingana dia afaka mampiasa rano fandroana ianao. Apetraho ao anaty ranom-boasary na toerana hafa mety izy. Aza mampiasa rano mafana loatra satria mety hahatonga ny vokatra sasany. Ny menaka fiara tianao hampiasaina dia tokony ho toy ny vovoka toy ny vahaolana toy izany raha toa ka manapa-kevitra ny handrehitra ilay vahaolana ka tokony ho hafanana koa ny solitany. Ny antony hanaovana izany dia ny mba hahazoana antoka fa ny volo manontolo dia mamitsaka ao amin'ny solvent. Ataovy azo antoka fa tsy misy poizina hita tavela any amin'ny vahaolana.
Arotsaho ao anaty vahaolana ilay voa voajanahary hafanana. Mifanaraka tsara ary miantoka fa tsy misy hormonina mihodinkodina ary raha mitranga izany dia raiso ny vahaolana amin'ny rano fandroana ary alaivo mankany amin'ny dingan'ny fizarana.
Ny dingana manaraka dia ny fampiasana taratra iray hanamboarana vahaolana izay hampiasainao hanivanana. Azonao ampiasaina imbetsaka ny orinasa lehibe na tsiranoka kely kokoa. Esory ny sivana 0.22 manodidina ny sivily ary atsangano ny kodiarana maitso ho any ambany ary esory ny tady.
Ampiasao ny tavoahangy toaka mba hanafoanana ny tapany ambony amin'ny vovobony. Apetaho ao ny fanjaitra maitso ary apetraho eo amin'ilay fitifirana ilay fanjaitra amin'ny sivana.
Indraindray mety ho hitanao fa mety hisakanana ny sivana na mety hitaredretra ny dingana. Amin'ity tranga ity, afaka manova ny sivana amin'ny iray hafa ianao mba hamerenana fotoana. Ny karazana sy ny habetsaky ny volo steroid izay ampiasainao dia mamaritra ny habetsian'ny fotoana iankinan'ny dingana.
Ny vokatra dia vonona hampiasaina aorian'ny fanisanao ny vokatra ao anaty vovobony tsy mamokatra.
Testosterone Cypionate fanamarinana
Efa renao ve ny fanamarihan'ny Testosterone Cypionate? Ity marika ity no tsara indrindra ary raha mbola tsy nahatsiaro tena ianao, dia mety hihevitra ny famakiana ireto fanamarihana manaraka ireto.
Hoy i Yuan: "Hatramin'ny nanombohako ity fanafody ity tamin'ny herintaona, dia nahatsikaritra vola be tao amin'ny gym. Ny satroboninahitra azoko jerena ary izao no nahatonga ahy ho tia ny gym mihoatra aza ".
Nilaza i Li fa tsy afaka mandehandeha any amin'ny gym. Afaka mandeha any am-piasana izy isan'andro raha tsy reraka. Isaky ny mandeha aorian'ny asa dia mandeha any amin'ny gym ary manao asa goavana amin'ny fotoana rehetra tsapany.
Nanomboka ny 200 mg isaky ny tapa-bolana ny Chen hatramin'ny nanoratan'ny dokotera azy. Hoy izy: "Hatramin'izao dia eo amin'ny làlana marina aho no mahazo ny hozatra sy ny lanjany. Misaotra an'io zava-mahadomelina io aho izao, mahatsapa ho toy ny lehilahy ".
Ny vidin'ny Testosterone Cypionate
Ankehitriny fantatrao hoe inona no vokatra azonao atao ho anao, azonao atao ny mahafantatra ny vidin'ny Testosterone Cypionate. Ohatrinona ny vidin'ny Testosterone Cypionate? Miankina amin'ny habetsahana izay tianao sy ny fampiasanao.
Mety miovaova ihany koa any amin'ny toeram-pivarotana samihafa arakaraka ny toerana misy azy.
Ahoana ny fividianana testosterone Cypionate amin'ny internet
Afaka mividy Testosterone Cypionate ianao amin'ny alalan'ny tsindrio ny totozy. Tonga miaraka amin'ny tombontsoa marobe toy ny mahazatra. Ity no tokony hatao;
Mitadiava tranokalan'ny AASraw.com
Karohy ny teny hoe "testosterone cypionate."
Fenoy ny fangatahana fangatahana mba hividianana izany ary manaiky izany. Anisan'izany ny habetsahana sy ny toerana misy anao.
Azonao atao ny mameno ny taratasy fangatahana dokotera fohy mba hamaritana ny fahaiza-manaonao hividy ilay vokatra. Afaka mameno haingana azy ianao ary manolotra izany. Ny solontenanay dia handinika izany ary mety hanaiky ny baiko.
Raha vao nekena ny baiko, dia afaka manao ny sandany ianao amin'ny fampiasana ny fomba tsara indrindra, ary rehefa vita izany dia alefa avy hatrany ny entana. Ny toerana misy anao dia hamaritra ny habetsahan'ny fotoana hitrandrahana ny vokatra.
Raha ny marina, raha te hanao fanovana amin'ny dia miaina ny orinasa ianao, ity no tena fifanarahana. Tsy hanenenanao velively ny fisafidianana ity lalana ity satria ny tombony dia tsy azo ovaina. Azonao atao ny tsy mitsahatra mitady karazana steroid hafa satria efa nahita olona iray izay tsy manana fahefana eo amin'ny tsena.
Ankoatra izany, dia afaka mihinana izay tianao ianao raha tsy manana tahiry matavy. Ny vatanao dia hiova, ary hahatratra ny vatanao tena tsara ianao. Mila fampiofanana kely ihany koa ianao mba hahazoana ilay vatana izay efa nitiavanao hatrizay.
Tsy ilaina ny manahy momba ny fanarenana aorian'ny fampiendrivotra mahatsiravina. Satria io vokatra io dia hampitombo ny fatran'ny azota sy ny proteinina. Ankoatra izany, hahazo hery bebe kokoa ianao, ary raha olana ho anao izany, dia azonao atao ny manana ny sainao rehetra hanomboka hanomboka indray ny fampiofanana anao.
Ny Testypone Cypionate dia tsy mampanantena fa hahatonga anao ho tsara tarehy kokoa, fa hanampy anao hanatratra tanjona amin'ny vatana izay hanampy anao hahazo medaily sy trophies maro.
Eo am-piarahamonintsika dia manakarama olona miavaka avy amin'ny sehatra isan-karazany isika. Ny traikefa matihanina, ny fiofanana tsara, ary ny fahatanterahany mahatalanjona izay ananany dia ny zava-bitantsika. Amin'ny maha-rafitra antsika dia manantena ny hampandroso ny fivoaran'izy ireo isika amin'ny alalan'ny fampiofanana matetika. Manome fitaovana ampy ho an'ny fifandraisana izy ireo mba hampitombo ny fitondran-tenany, ny fanoloran-tenany ary ny fahombiazany.
Manolotra vokatra tsara isika amin'ny vidin'ny fifaninanana. Ny vokatray dia madio, ary azonareo antoka fa tsy voavakina ny heriny. Azo atao amin'ny alalan'ny fampiasana fitaovana tsara indrindra amin'ny fizotran'ny famokarana rehetra. Mandritra ny famokarana, dia manaiky ny fitsipika sy ny fanamarinana kalitao isika mba hahazoana antoka fa manome vokatra izay mahafa-po ny zavatra ilain'ny mpanjifa.
Manao ezaka tokana isika mba hitazomana ny tontolo iainantsika amin'ny alàlan'ny fanaovana antoka fa ny fiasa izay ataontsika dia tsy misy vokany ratsy. Farany, ny mpanjifantsika dia ny mpanohana anay. Ny serivisinay mpanjifa dia mamaly ary mihaino ny mpanjifa rehetra. Zavatra iray hafa izay manavaka antsika amin'ireo mpanome tolotra hafa dia ny fandraisantsika ny valin'ny mpanjifa tsotsotra. Aoka ho fitarainana na fangatahana izany; Ny feonao dia mandray foana.
Mianara avy aminay anio ary miaina ny tolotra tsara azonay. Tsy vitan'ny hoe hahazo ny vokatrao tsy ho ela ianao fa hahazo ny asa ho anao.
Fitsipika sy fampiharana ny endocrinologie sy ny metabolism, natontan'i Kenneth L. Becker pejy 1189-1893
Testosterone: Action, Meny, Fanovana, natontan'i E. Nieschlag, HM Behre 272-317
Williams Textbook of Endocrinology, nataon'i Shlomo Melmed, Kenneth P. Polonsky, P. Reed Larsen, Henry M. Kronenberg, pejy 758-766
Ny 7 Best Nootropics (Smart Drugs) eo amin'ny tsenan'ny Sunifiram 10 zavatra tsy maintsy fantatrao alohan'ny handraisanao ny DMAA